के गर्यो निखिलले यस्तो ? - Himalayan Kangaroo
के गर्यो निखिलले यस्तो ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १३ भाद्र २०७२, आईतवार १५:४६ |
काठमाडौं । करिब ७ वर्ष नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट एकाएक गायब भएका निखिल उप्रेती आफ्नै निर्माण र निर्देशनमा बनेको भैरव चलचित्रबाट पुनः नेपाली दर्शकहरु माझ आएका छन् । उनको पुनरागमनलाई लिएर विभिन्न अनुमानहरु लगाइएको थियो । स्टार क्रेज उचाइमा रहेकै बेला कान्छी श्रीमति भगाएपछि हराएका निखिलको यसबीचमा छवि र क्रेज दुवै विग्रिसकेको एकथरि अनुमान थियो । तर अर्को थरि दर्शकहरुले भने उनी यसबीचमा अझ बढी माझिएर आएको अनुमान लगाउँदै थिए । यहीबीचमा निखिल निर्देशित भैरव चल्यो तर मधेशका धेरै ठाउँहरुलाई छोडेर । मुलुक राजनीतिक उथलपुथलको संक्रमणमा फसिरहेको बेला चलचित्र रिलिज गर्ने निर्णयलाई पनि धेरै चलचित्रकर्मीले निखिलको दुस्साहस मानेका थिए । तर निखिलले बाजी मारेरै छोडे ।
उनको कमव्याक मानिएको फिल्म ‘भैरव’ले दुई दिनमै १ करोड भन्दा बढी कमाई गर्यो । दुई दिनमै करोडको आँकडा छोएको भैरवको कमाईलाई कीर्तिमानी मानिएको छ । आइतवार पनि सार्वजनिक विदा भएपछि ‘भैरव’ले आइतवार पनि काठमाडौंका धेरै हलहरुमा सबै शो हाउसफुल रह्यो । यसअघि शनिवार गोपीकृष्णका ३, गुण हलका ४ र अष्टनारायण हलका ३ वटै पर्दामा भैरव हाउसफूल भएको थियो । त्यसैगरि ‘भैरव’लागेका बाँकी हलपनि ओभरफ्लो भैरहेको बताइउको छ । ललितपुरको गुणमा त हिन्दी फिल्म ‘फ्यान्टम’लाई ठूलो हलबाट सानोमा झारेर ‘भैरव’ लगाईएको छ । फिल्म चल्नुलाई निखिलको स्टारक्रेज मुख्य कारण मानिएको छ ।
साउथको फिल्म हेर्न थालेका दर्शकले सोही टेस्टको सिनेमा पाएकाले पनि दर्शकले ‘भैरव’लाई रुचाएको विश्लेषण गरिएको छ । निखिल फिल्मभित्र इमान्दार पुलिस अफिसरको भूमिकामा देखिएका छन् । आउँदो हप्ता हिन्दी तथा नेपाली फिल्म रिलिज नुहने भएपछि भैरवले अझ बढी व्यापार गर्ने निश्चित छ ।
एक करोड भन्दा बढीमा बनेको भैरवले लगानी उठाउन भने तीन करोड हाराहारीको व्यापार गर्नुपर्नेछ । तर शुरुवाती व्यापार हेर्दा भैरवले लगानी उठाएर पनि राम्रै नाफा दिलाउँने छाँटकाँट देखाएको छ ।
भैरवमा निखिल आफैं शीर्ष भूमिकामा छन् भने अनु शाह नायिका छिन् ।
Previousदीपक र दीपाश्रीको नेतृत्वमा पत्रकार ऋषि धमलामाथि हमला
Nextसंविधानको विधेयक संशोधनका लागि ७ दिनको समय
निर्देशक अर्पण थापासँगै अभिनेत्री ऋचा शर्मा अष्ट्रेलियामा
९ असार २०७४, शुक्रबार १३:०७
मीटु अभियान : नेपाली अभिनेत्रीहरुले पनि बाहिर ल्याउन थाले यौन हिंसाका घटना
११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:११
८ श्रावण २०७६, बुधबार १३:३९
१५ पुष २०७५, आईतवार ०१:४०